Archive du 20181031
Marc Ravalomanana “Asa mivaingana ny antsika fa tsy nofinofy”
Mahabo, Belo sur Tsiribihina, Maintirano, Antsalova, Miandrivazo,… no nanaovan’ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25 fampielezan-kevitra omaly.
Hetsiky ny firaisankinan’ireo kandida Inona marina no tena tanjona ?
Navelan’ny avy eo anivon’ny Emmoreg hanatontosa malalaka ny hetsika fitaterana amin’ny vahoaka ny dingana efa vitany mikasika ny tolona fitakiana ny famerenana ny fanokafana ny lisi-pifidianana tetsy Mahamasina omaly ny avy eo anivon’ny firaisankinan’ireo kandida.
Edgar Razafindravahy “Fanorenana ifotony ihany no vahaolana eto”
Raha nisy fotoana nanginany dia niverina niresaka politika indray omaly tao amina onjampeo tsy miankina iray Atoa Edgar Razafindravahy, filoha mpitari-dalana ny antoko ADN.
Fiainam-pirenena Mitaky ny fandraisany anjara ny vahoaka
Raha ny hevitry ny hoe “politika” tany am-piadohana dia fanasoavam-bahoaka. Tsy fahavononana sy tsy fahamatorana tsotr`izao anefa no hasehon`ny mpanao politika sasany tamin`ity fifidianana ity.
Misy lalàna mifehy ny fifidianana, hoy ny loholona Amido, ary io no lehibe indrindra isorohana ny zava-mitranga.
Taratasin’i Jean Inona indray ity seninareo ity ?
Ahoana ry Jean a ? Inona indray ary ity fikanareo ity ? Ianareo ireto koa anie dia misenina mihitsy e ! Dia inona izao no hovahanareo ao anatin’izao herinandro izao sisa ?
Fifidianana filohan’ny FMF Any Sambava no fotoana amin’ny 3 novambra
Fantatra ankehitriny fa any Sambava Faritra SAVA no hanatanterahana ny fifidianana ho filohan’ny FMF “Federasion’ny Baolina Kitra Malagasy” amin’ny sabotsy 3 novambra 2018 ho avy izao.
Basket Tompondakan’i Afrika FIBA 3 x 3 2018 Tsy ho any Lomé Togo i Elly Randriamampionona
Araka ny efa fantatra dia hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika taranja basikety FIBA 3 x 3 hotontosaina any Lomé Togo ny 9 ka hatramin’ny 11 novambra 2018 izao ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ity taranja ity.
Tsy fahampian’ny tarehimarika momba ny fambolena Manakana ny fampandrosoana ara-toekarena
Omaly talata 30 oktobra no natao tetsy amin’ny DLC Anosy ny latabatra boribory nandraisan’ny mpamokatra sy ny mpikirakira tarehimarika hanomanana ny fanisana ankapobeny momba ny fambolena.
Ny vahiny no miantoka ny fanamboarana ny rova eto amintsika. Isan’ny vita amin’izao fotoana izao ny rovan’Ambohidratrimo izay tamin’ny taona 2015 no nanomboka namboarina. Efa handeha tsy ho ela koa ny fanambarana ny rovan’ny mpanjaka.
Tsy rariny, hoy ry zareo avy eo anivon’ny firaisankinan’ireo kandida, raha olom-pirenena miisa 4 tapitrisa be izao no tsy ao anatin’ny lisi-pifidianana. Maninona, hoy izy ireo, raha ireo mpifidy foronina miisa 2 tapitrisa no esorina.
Lasa 20% sisa ny tahan’ny fanondranan’entan’ny firenena Sinoa mankany Amerika noho ny fampakarana ny hetran’ny fadin-tseranana. Raha tsiahivina, nakarin’izy ireo tsikelikely izany satria niainga 10%, avy eo 25% ary amin’izao fotoana dia mieritreritra hampakatra 50% mihitsy ny amerikanina.